Soavaly Noti dia tranokala iray izay nanolotra anao toro-hevitra sy tetika hatramin'ny 2011 mba hahafahanao mikarakara ny mpitaingina jamba amin'ny fomba tsara indrindra: miaraka am-pitiavana, amin'ny fanajana ary amin'ny zavatra rehetra izay tsy maintsy fantatry ny mpitaingina na mpankafy ireto biby ireto, toy ny ny aretin'izy ireo manokana amin'ny soavaly na ireo karazany isan-karazany misy.
Ny ekipan'ny fanontana ao amin'ny Noti Caballos dia misy olona tia an'ireny biby ireny, ary manam-pahaizana momba izany. Raha te hiara-hiasa aminay ianao, fenoy ity takelaka manaraka ity hahafahantsika mifandray.
Hatramin'ny fahazazako dia tsapako fa ny soavaly dia ireo zavaboary mahafinaritra ahafahanao mahita an'izao tontolo izao amin'ny fomba fijery iray hafa ka hatramin'ny fahalalana bebe kokoa momba ny fihetsik'izy ireo. Ny tontolon'ny Equine dia mahavariana toy ny tontolon'olombelona ary maro amin'izy ireo no manome anao fitiavana, orinasa, fahamendrehana ary ambonin'izany rehetra izany dia mampianatra anao izy ireo fa afaka maka ny fofonainao mandritra ny fotoana maro.
Ny soavaly dia ampahany tamin'ny fiainako hatry ny ela. Hatramin'ny naha-tadpole ahy dia gaga tamin'ny sary aho, ary velona kokoa aza. Heveriko ho biby tsy mampino izy ireo, tena kanto, nefa manan-tsaina ihany koa.
Vehivavy soavaly mitafy akanjo. Miasa ho mpanara-maso sy fitafiana soavaly amin'izao fotoana izao ao amin'ny Ivontoerana Sosialin'ny Equestrianan'i Celta Equestrian, ao amin'ny Hijos de Castro y Lorenzo Livestock. Manana fametahana Espaniôla-Arabo aho ary samy miara-miasa amin'ny kanto Dressage izahay. Mbola tsy nampiasa saina aho ary efa liana tamin'ny soavaly. Iray amin'ireo nofinofiko lehibe indrindra ny hahafahako mampita vaovao marim-pototra amin'ireo mpamaky ahy izay hanampy azy ireo hanatsara ny zavatra niainany tamin'ireny biby mahafinaritra ireny, izany no antony ahazoako manana tranonkala Equine ihany koa.
Tiavo ny soavaly hatramin'ny mbola kely. Tiako ny mianatra sy milaza zava-baovao momba ireo biby ireo, manan-kaja sy mendri-kaja. Ary raha mikarakara azy ireo tsara ianao, raha omenao azy ireo izay rehetra ilainy dia hahazo be ianao ho valiny. Mila manana faharetana kely fotsiny amin'ireo soavaly ianao, satria afaka mamoaka ny tsara indrindra amin'ny tsirairay izy ireo.